Macaanka Nooca 2aad Gaaldiid
Bogga Hore > Causes > Macaanka Nooca 2aad
1 Insulin waa hormoon ay u baahan yihiin unugyada jirku si ay u qaataan sonkorta ku jirta dhiiga. Hadii aad qabto Nooca 2aad ee Macaanka ma jirto Insulin ku filan jirka sidaa darteed sonkor badan ayaa jirka ku hadhaya. Calaamadah lagu garto nooca 2aad ee Macaanku si qunyar ah ayaa loo dareemaa , waxa ka mid ah inaad dareento daal, haraad iyo kaadidada oo badata. Jirka oo la dhaqaajiyo iyo cunto fiican oo la cuna way dhimi kartaa sonkorta dhiiga, hase ahaatee waxa kale oo aad u baahan kartaa dawooyin.
2 Markaad qaadanayso Insulin ama kaniinada kale ee hoos u dhiga sonkorta dhiiga waxa mararka qaarkood dhici kara in sonkorta dhiigu hoos u dhacdo. Waxa lagu gartaa calaamadahan.
3 Hadii sonokorta dhiigagu hoos u dhacsantahay oo la gaaray xilligii aad qaadanaysay Insulinta ama kaniinada hoos udhiga sonkorta dhiiga ha qaadanin ee sida ugu dhakhsaha badan ula xiriir xarunta caafimaadka ama dhakhtarkaaga, sababtoo ah hadii dhiiga sonkorta oo aad u dhacsan aad qaadato Insulin hoos usii dhigaysa sonkorta dhiiga waxay keeni kartaa dhimasho.
Insulin waa hormoon ay u baahan yihiin unugyada jirku si ay u qaataan sonkorta ku jirta dhiiga. Hadii aad qabto Nooca 2aad ee Macaanka ma jirto Insulin ku filan jirka sidaa darteed sonkor badan ayaa jirka ku hadhaya. Calaamadah lagu garto nooca 2aad ee Macaanku si qunyar ah ayaa loo dareemaa , waxa ka mid ah inaad dareento daal, haraad iyo kaadidada oo badata. Jirka oo la dhaqaajiyo iyo cunto fiican oo la cuna way dhimi kartaa sonkorta dhiiga, hase ahaatee waxa kale oo aad u baahan kartaa dawooyin.